နေအိမ် | Jiabo
Jiabo သည်သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါများ၊ ကလေးအနှီးများနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များကို ၁၈ နှစ်ကြာထုတ်လုပ်သည်။
သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် OEM နှင့် ODM ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါ။
Foshan Jiabo သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်နည်းပညာ Co. , Ltd ။ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုထုတ်ကုန်များ၏ OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါများ၊
တစ်ညလုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်အသားတင်သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါပုဒ် anion သန့်ရှင်းရေးအခင်းများ
တစ်နေ့လုံးရောင်းအားတစ်ကိုယ်ရေသုံးတံဆိပ်အသားတင်သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါ anion သန့်ရှင်းရေးအခင်းများသုံးသည်
Careboss သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပဝါပေးသွင်းသူများသည်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတို့မှဖောက်သည်များထံမှတစ်ကြိမ်သာ OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ ၀ န်ထမ်းများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM အဖွဲ့များရှိသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ Win-Win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖန်တီးပါ"
Careboss ကလေးအနှီးများနှင့်သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါစက်ရုံများသည်ပထမတန်းကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများအသုံးပြုခြင်းကိုအမြဲလိုက်နာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်အတွက်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့အတွက်ကုမ္ပဏီသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စားသုံးသူအားနူးညံ့။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောအတွေ့အကြုံသစ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သော“ အပြည့်အဝစိမ့်ဝင်နိုင်သည့်၊
အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရောင်းရဆုံးလူမီနီယံသတ္တုပါးထုပ်ပိုးပန်းပွင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ chip ကိုသန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါ
1.Nice pads ထွက်လာမယ့်! 2.Sanitary pad ပါ Floding ၃ ။ သင့်ရှေ့မှောက်၌ပြီးပြည့်စုံသောသန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါအပိုင်းပိုင်း!
HighQuality Case လက်ကား - Foshan Jiabo Sanitary Products Technology Co. , Ltd.
Jiabo အမှတ် ၄ ထပ်၊ စက်ရုံသုံး၊ Tagang၊ Baishaqiao, Shishan Town, Foshan City, Foshan City ။ ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်။ တရုတ်အဓိကထုတ်ကုန်များ။ ဤထုတ်ကုန်သည်တိုက်စားခြင်းမှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းများမရှိခြင်းကြောင့်ချေးသည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးဤကိစ္စတွင်မအောင်မြင်နိုင်ပါ။
Foshan Jiabo သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၁၈ နှစ်ကြာမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်။ စိတ်ချရသောကျန်းမာရေးနှင့်သန့်ရှင်းသောထုတ်ကုန်များကိုအထူးထုတ်လုပ်သည်။ ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို ISO9001, SGS, CE စသည်တို့ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။
& ပေးသွင်းသူများ၏ profile များကို။
Careboss သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ ၀ န်ထမ်းများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM အသင်းရှိပြီးဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှဖောက်သည်များအထိတစ်ကြိမ်သာ OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖန်တီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ “ ကမ္ဘာကြီးကိုဂရုစိုက်ပါ၊ ကမ္ဘာကိုချစ်ပါ” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်စံချိန်တင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ကြိုးပမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အကြံပြုချက်များရှိပါကအောက်ပါဖောင်ကိုဖြည့်ပါ။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။